Azonao atao izao ny mividy Premiere Elements 2021 sy Photoshop Elemen 2021 | Famoronana an-tserasera
Photoshop Elements 2021 sy Premiere Elements 2021 no natolotra nataon'i Adobe omaly ary amin'ity tranga ity dia napetraka tao amin'ny Adobe Sensei, ny fahaiza-manao artifisin'ity orinasa ity ary napetraka tamin'ny famolavolana sary amin'ny fiparitahan'ny velarana rehetra.
Ity suite ity ny programa «singa» dia vidiana misaraka Ary azontsika lazaina sahady fa toy ny programa Adobe izy ireo talohan'ny namoahana Creative Cloud na Adobe CC. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia maherin'ny 100 € no andoavanao ary manana programa feno ianao amin'ny famoahana horonantsary na sary amin'ny tranga Premiere na Photoshop.
Adobe Sensei nentina tany amin'ny Photoshop Elements 2021 ary Premiere Elements 2021 no mamela na ny mpampiasa antonony na ny matihanina dia fanatsarana ny fahaizana manova sy fikambanana.
Raha manomboka amin'ny Element Premiere isika, Azontsika atao ny miresaka momba ny Selection of Objects hampiharina amin'ny zavatra iray na faritra misy ny filaharan'ny horonan-tsary. Fampisehoana GPU nohatsaraina mba ahafahantsika mizaha sary an-tsehatra nefa tsy mila manome azy ireo, na koa ny fahafahantsika mampiditra hira 21 amin'ny horonantsarinay avy amin'ny tranomboky.
Ho an'ny programa roa nanampy "Editions Guided" vaovao dimy hitondra antsika amin'ny totalin'ny 83. Ireto vaovao 5 ireto dia: Duotones, Landscapes tonga lafatra, fihetsiketsehana / fisafidianana ary fanaovana duplication, fampirantiana indroa ary sarisary matte animated.
Andininy hafa ho an'ny Premiere Elements 2021 no rafitra katalaogy mandeha ho azy ho backup hahafahantsika manana backup voalamina tsara ahafahantsika miverina aminy amin'ny fotoana rehetra. Raha fintinina, ny Photoshop Elements 2021 sy ny Premiere Elements 2021 dia fahatongavana manan-danja roa hanomanana izany 2021 izay mbola manana roa volana sy tapany sisa isika ary ho mora kokoa amin'ny fanavaozana ireo vokatra Adobe roa ireo.
Aza adino ny sasany amin'ireo vaovao hafa izay ao an-tsaintsika tato ho ato miaraka amin'i Adobe.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Photoshop » Adobe dia manolotra ny Photoshop Elements 2021 sy ny Premiere Elements 2021 miaraka amin'ny lantom-peony ao amin'ny Adobe Sensei